Asa 9 - Ny Baiboly
Asa toko 9
Ny nibebahan'i Saoly - Ny nanasitranan'i Piera an'i Enea sy ny nananganany an'i Dorkasy tamin'ny maty.
1Tamin'izany Saoly, dia mbola tsy nihevitra afa-tsy ny handrahona sy hamono ny mpianatry ny Tompo, ka nanatona ny lehiben'ny mpisorona izy, 2nangataka taratasy taminy ho an'ny sinagogan'i Damasy mba hitondrany am-patorana ho any Jerosalema izay rehetra hitany manaraka izany làlana izany, na lahy na vavy. 3Raha mbola teny an-dàlana izy ka efa mby akaikin'i Damasa dia nisy fahazavana tonga tampoka avy any an-danitra nanjelanjelatra nanodidina azy. 4Dia lavo tamin'ny tany izy, ary nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy hianao? 5Ka hoy izy: Iza moa hianao, Tompoko? - Ary hoy ny Tompo: izaho no Jesoa izay enjehinao; sasa-poana hianao mitroatra manohitra ny fanindronana. 6Dia nangovitra sy very hevitra izy, ka nanao hoe: Tompo ô! inona no tianao hataoko? 7Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka midira ao an-tanàna, ary ao no holazaina aminao izay tsy maintsy hataonao. Tafatsatoka talanjona foana ny olona niaraka taminy, fa nandre ny feo, nefa tsy nahita olona na iza na iza. 8Nony niarina avy hatreo i Saoly, dia nanokatra ny masony, fa tsy nahita na inona na inona; ka olona no nitantana azy hankao Damasa. 9Ary hateloana izy no tsy nahita, sady tsy nihinana na nisotro.
10Tao Damasa fahizay dia nisy mpianatra anankiray atao hoe Anania; nilazàn'ny Tompo tamin'ny tsindrimandry hoe: Ry Anania. Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko. 11Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka mandehana any amin'ny làlana atao hoe i Mahitsy; tadiavo ao an-tranon'i Jodà, fa misy lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsy, efa mivavaka izy izao. 12(Tamin'izay koa Saoly dia nahita lehilahy anankiray tamin'ny tsindrimandry atao hoe, Anania izay niditra sy nametra-tànana taminy mba hampahiratra azy). 13Ary Anania namaly hoe: Tompoko, reko tamin'ny olona maro fa loza loatra no nafitsok'io lehilahy io tamin'ny olonao masina tao Jerosalema; 14ary atý indray izy izao nahazo fahefana tamin'ny lehiben'ny mpisorona koa mba hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. 15Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa io lehilahy io dia fanaka voafidy ho ahy, hitondra ny anarako eo anatrehan'ny jentily sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely; 16ary hasehoko azy ny mafy tsy maintsy hiaretany noho ny anarako. 17Dia nandeha Anania, ka nony tonga tao an-trano, dia nametra-tànana taminy nanao hoe: Ry Saoly rahalahy, Jesoa Tompo izay niseho taminao teo amin'ny làlana nalehanao, dia naniraka ahy mba hahiratra indray hianao sy ho feno ny Fanahy Masina. 18Niaraka tamin'izay, nisy zavatra toy ny lanin-kazandrano niala teo amin'ny masony, ka nahiratra indray izy. Dia nitsangana izy ka natao batemy; 19ary nihinan-kanina, ka dia natanjaka indray.
Niara-nitoetra andro vitsivitsy tamin'ny mpianatra tao Damasa i Saoly, 20ary nitory teo amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay izy, ka nilaza fa Jesoa no Zanak'Andriamanitra. 21Talanjona izay rehetra nandre ka nanao hoe: Tsy ity va ilay nanenjika izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema, sy tonga atý mba hitondra azy am-patorana ho any amin'ny lehiben'ny mpisorona koa? 22Vao mainka nihanahery anefa i Saoly sy nandresy lahatra ny Jody nonina tao Damasa, naneho marimarina tamin'izy ireo fa Jesoa no Kristy.
23Nony afaka andro maromaro dia nioko hamono azy ny Jody; 24fantatr'i Saoly ihany anefa ny hevi-dratsiny. Nambenan'izy ireo andro aman'alina ny vavahady mba hamonoany azy; 25kanjo nalain'ny mpianatra kosa izy, nony alina, ka nataony tao anatin'ny sobiky, dia nampidininy tamin'ny manda. 26Dia nankany Jerosalema i Saoly, ka nitady hikambana tamin'ny mpianatra, nefa natahotra azy izy rehetra satria tsy ninoany fa mpianatr'i Jesoa koa izy. 27Tamin'izay nalain'i Barnabe izy ka nentiny tao amin'ny Apostoly, dia notantarainy tamin'izy ireo ny nahitany ny Tompo teny an-dàlana, sy ny nitenenany taminy, ary ny hasahiana nasehony tamin'ny nitoriany ny anaran'i Jesoa tao Damasa. 28Izay vao niara-niditra sy nivoaka tamin-dry zareo tao Jerosalema izy, sady nitory tamin-kasahiana tamin'ny anaran'ny Tompo. 29Niresaka tamin'ny jentily koa izy, ary niady hevitra tamin'ny Helenista; kanjo notadiavin'ireo hovonoina. 30Ka nony fantatry ny rahalahy izany, dia nateriny tany Sezarea izy, vao nalefany ho any Tarsy.
31Niadana ny Eglizy eran'i Jodea sy Galilea ary Samaria manontolo fahizany, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny Tompo izy, no nihamaro tamin'ny famporisihan'ny Fanahy Masina koa. 32Tamin'izay, raha namangy ny mpianatra rehetra isan-tanàna i Piera, dia nankao amin'ny olona masina izay nonina tao Lidà koa, 33ka nahita lehilahy anankiray atao hoe Enea, izay nandry teo am-pandriana hatramin'ny valo taona, fa malemy, 34ary nanao taminy hoe: Ry Enea, hanasitrana anao Jesoa-Kristy; mitsangàna ka amboary ny fandrianao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy. 35Nony nahita azy izay rehetra nonina tao Lidà sy Saròna, dia nibebaka nanatona ny Tompo avokoa.
36Ary tany Jope nisy vehivavy anankiray mpianatra atao hoe Tabità, na hoe Dorkasy raha adika, izay nahavita asa soa amam-piantrana betsaka. 37Narary izy tamin'izany andro izany, dia maty; ka nony avy nampandroiny ny fatiny, dia napetrany tao amin'ny efi-trano ambony. 38Ary Lidà moa dia akaikin'i Jope ihany; ka ren'ny mpianatra fa hoe ao Piera, dia naniraka roa lahy ho any aminy izy ireo hangataka azy hoe: Aza miatoato hankaty aminay. 39Dia nitsangana Piera ka niara-nandeha tamin'ireo. Nony tonga izy, dia nentiny tany amin'ny efitra ambony, ka nohodidinin'ny mpitondratena rehetra, izay sady nitomany no nampiseho taminy ny lamba aman'akanjo nataon'i Dorkasy fony fahavelony. 40Navoakan'i Piera avokoa ny olona rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, vao nanatrika ny faty nanao hoe: Ry Tabità, mitsangàna. Dia nahirany ny masony, ka nony nahita an'i Piera izy, dia niarina. 41Ary Piera kosa nanolo-tànana azy, sy nampitsangana azy; dia niantso ny olona masina sy ny mpitondratena, ka nanolotra azy velona tamin'izy ireo. 42Niely eran'i Jope manontolo izany, ka betsaka no nino ny Tompo. 43Ary Piera nitoetra andro maromaro tany Jope, tao amin'ny mpandon-koditra anankiray atao hoe Simona. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0905 seconds